ပညာရေးဆိုင်ရာမော်ကွန်းတိုက်» Hodges တက္ကသိုလ်
ပညာရှင်များ, Hodges Connect ကို
Hodges တက္ကသိုလ်မှလုပ်သားအင်အားကွာဟချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် Hodges တက္ကသိုလ်မှကူညီသည်။ Hodges Connect သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်သားအင်အားကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောပြိုင်ဘက်အားပေးခြင်းအကြောင်းနှင့်အလုပ်ရှင်ထံမှလိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အတူ [... ] အတွက်ပြင်ဆင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။	ဆက်ဖတ်ရန်
Written by: ဒေါက်တာဂျွန် Meyer, သမ္မတ, Hodges တက္ကသိုလ်, ခြောက်လခွဲခြာနှင့်အတူ, သငျသညျမဖြစ်နိုင်ဆက်သွယ်မှုစေနိုင်သည်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်လုပ်သားအင်အားအကြားဆက်စပ်မှုမှာတိုက်ရိုက်ဖြစ်သည်။ Hodges တက္ကသိုလ်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ပညာရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှုရရှိမှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုနားလည်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ [... ] ၏လုပ်သားအင်အားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘွဲ့နှင့်အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးသည်။	ဆက်ဖတ်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့၏ 2019 သူနာပြုများကိုတင်ပြခွင့်ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ဂုဏ်ယူပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 2019 သူနာပြုများအားဂုဏ်ယူပါတယ်။ ၂၀၁၁ မေလ ၁၀ ရက်တွင် Hodges တက္ကသိုလ်မှယခုနှစ်ဘွဲ့ရသူနာပြုများအတွက် Pinning အခမ်းအနားကိုကျင်းပသည့်အတွက်ဂုဏ်ယူခဲ့သည်။ သူနာပြုများရက်သတ္တပတ်ကိုဂုဏ်ပြုရန်အလွန်ကောင်းသောစိတ်ကူးပါတကား! ကျွန်ုပ်တို့၏ Pinning အခမ်းအနားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သူနာပြုများအတွက်အထူးအချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူနာပြုတစ် ဦး စီသည် [... ] သို့ရောက်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့သည်။	ဆက်ဖတ်ရန်
100% အမျိုးသားစာမေးပွဲ Pass ကိုနှုန်း
၁၀၀% အမျိုးသားစာမေးပွဲအောင်နိုင်မှုနှုန်း Hodges တက္ကသိုလ်မှ ၂၀၁၇ ကာယကုထုံးလက်ထောက်အတန်းကိုသူတို့၏အမျိုးသားစာမေးပွဲများတွင် ၁၀၀% Pass Rate ချီးကျူးခြင်း! Hodges U ကိုကိုယ်စားပြုဖို့နည်းလမ်း! သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့လေးစားခံရသော Hodges Alumni ဟုခေါ်ဆိုရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်ဂုဏ်ယူပါသည်။	ဆက်ဖတ်ရန်
Hodges တက္ကသိုလ်မှဥက္က27္ဌ Dr. John Meyer မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်၊ စနေနေ့တွင်တက္ကသိုလ်၏အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းသစ်ကိုဆွေးနွေးနေသောကျောင်းသားများသည်ဆန်းသစ်သောပရိုဂရမ်းမင်းနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာချဉ်းကပ်နိုင်မှုကိုပံ့ပိုးရန်တီထွင်ဆန်းသစ်သောပရိုဂရမ်နှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ Naples Daily News ၏ထုတ်ဝေ။ ဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကိုဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ။ [... ] ကိုရှာရန် pathways.hodges.edu သို့သွားပါ။	ဆက်ဖတ်ရန်
Homegrown Leader - Jacob Winge အတွက် #MyHodgesStory Jacob Winge ဟာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာဥပမာပြတာပါ။ Wing လိုပဲဒီဂရီရဖို့ရွေးချယ်တဲ့ကျောင်းသားအများစုဟာတစ်ခုခုဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားကြတာပါ။ အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ်သာရှိသေးသော်လည်းသူသည် [... ]	ဆက်ဖတ်ရန်
သင်၏အလုပ်အကိုင်တိုးတက်ရေးအတွက်ဒီဂရီရရှိမှု၏အကျိုးကျေးဇူးသုံးခုအရွယ်ရောက်ပြီးသောကျောင်းသားများသည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျောင်းသို့ပြန်လာကြသည်။ မကြာခဏဆိုသလိုဘဝသည်လမ်းခရီးတွင်ရောက်ရှိလာပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုယ်ပိုင်ပန်းတိုင်များထားရှိစေသည်။ သို့သော်သင်၏အလုပ်တွင်ရပ်တန့်နေပါကကျောင်းသို့ပြန်သွားခြင်းသည်သင် [... ] ၏အဖြေဖြစ်နိုင်သည်။	ဆက်ဖတ်ရန်
အောင်မြင်သောစီးပွားရေးပညာရှင်များသည်ကောင်းမွန်သောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဖော်ထုတ်ကြသည်
အောင်မြင်သောစီးပွားရေးပညာရှင်များသည်ကောင်းမွန်သောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်ထူးချွန်သောအကြီးအကဲများသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့ကိုမှတ်သားဖွယ်ကောင်းသောအရည်အချင်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ခက်ခဲသည်၊ ထိရောက်သောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး သည် [... ] ကိုရိုးရှင်းစွာဖော်ပြနိုင်သောသူဖြစ်သည်။	ဆက်ဖတ်ရန်
၄။ MBA ကသင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ကိုတိုးတက်အောင်ကူညီပါလိမ့်မယ်
၄။ MBA ဘွဲ့ကသင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ကိုတိုးတက်အောင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းများသမိုင်းကြောင်းအရ၊ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ၏စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကိုကိုင်တွယ်လိုသောဆန္ဒနှင့်စွမ်းရည်သည်လုံလောက်ပုံရသည်။ သို့သော်ယခုအခါစက်မှုလုပ်ငန်းအများစုသည်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည် [... ]	ဆက်ဖတ်ရန်